Banyere Anyị - XuZhou Xinpaez Water ọcha Equipment Co., Ltd.
Xinpaez: Specialist na mmiri ọgwụgwọ ebe ọ bụ na 2010 China Xinpaez mmiri ọcha ngwá Co., Ltd. bụ a illustrious emeputa pụrụ iche na-eme nnyocha, mmepe, mmepụta na ahịa nke ịsa ahụ isi, ịsa hoses, mmiri nzacha, mmiri nyo akụkụ, na kichin ngwa. E guzobere ya n'afọ 2010 na isi obodo edebanyere nde yuan 6 (RMB). N’okpuru ntuziaka bara uru nke onye isi anyị, ‘Maazị. WenLian Qiao ', anyị enwetala nnukwu ihe ịga nke ọma na ngalaba a. Ọchịchị ya na-adọrọ adọrọ, ihe ọmụma zuru ezu na mkpali mgbe niile enyerela anyị aka ịkwado onwe anyị dị ka nzukọ a pụrụ ịdabere na ngalaba a.
Ugbu a anyị na-agba ọsọ 10 mmepụta edoghi. Ndi otu ndi oru aka nwere ike inye anyi ike.
Companylọ ọrụ anyị nwere ndị otu QC (Quality Control) otu, ha ga-eduzi nyocha nlele oge niile na oge ụfọdụ iji hụ ogo nke usoro mmepụta, wepu nchegbu ndị ahịa ọ bụla. Ndị ọkachamara anyị na-eji teknụzụ nhicha mmiri ọhụụ na teknụzụ mmiri eme ihe maka mma kacha mma nke mmiri. Ha na-arụkọ ọrụ ọnụ na ibe ha iji rụzuo ebumnuche nhazi.
Anyị ahịa na ọrụ netwọk na-agbasa niile ná mba ahụ, isi mbupụ mba ndị Germany, South Korea, Italy, India, Russia, Australia, Indonesia, wdg Anyị isi imekọ ihe ọnụ ụlọ ọrụ bụ: RongShiDa, ZhiGao, Angel, Midea, wdg Anyị isi uru nke ulo oru bu "Lekwasi anya na nma karie ibu, meputa ya n'obi". Anyị nwere olile anya iwetara gị ọrụ nwere afọ ojuju site na ọrụ ike anyị. Nwere ike ịkpọ ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla Ọ bụrụ na ịchọta nsogbu ọ bụla n'oge eji ngwaahịa anyị. Anyị ga-edozi nsogbu niile ahịa gachara ka ị nwee afọ ojuju. Iji mee ka ị zụrụ n'udo, Xuzhou Xinpaez na-ekwe nkwa ihe ndị a: ịdị elu dị elu, ọnụ ala, nnyefe ọsọ ọsọ, ọrụ ahịa kacha mma.
Na Xinpaez, anyị bụ akara aka na ọgwụgwọ mmiri na China. Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị enwetawo ọtụtụ ahụmahụ na ngalaba a. Anyị na-adabere na otu ndị ọkachamara maka ndị ọkachamara. N'agbanyeghị ihe ị chọrọ, anyị ga-enwe ike igosi gị ihe kachasị mma maka inweta mmiri dị ọcha.
Anyị na-enye naanị ngwaahịa dị elu. Ebumnuche anyị bụ igbo mkpa ndị ahịa anyị. Anyị nwere ngwá ọrụ dị elu, teknụzụ ọkachamara, usoro sayensị na njikwa njikwa njikwa. Anyị ga-ama mkpa gị n’oge, wee mepụta ụdị ngwaahịa niile dị ka mkpa gị si dị.
Ndị ọkachamara anyị họpụtara nwere ihe ọmụma na ahụmịhe zuru ezu banyere ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-edozi mmiri. N'ihi ọrụ ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-aga nke ọma, anyị enweela ike iguzo onwe anyị n'ihu ndị asọmpi anyị. Ọzọkwa anyị bụ ndị Golden PLUS Supplier certificated by SGS. Ihe nzacha mmiri anyị na cartridges niile nwere ROHS, REACH na asambodo ndị ọzọ.
Xuzhou Xinpaez Mmiri ọcha
Ilọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ